अण्डाको बोक्राले चम्किनेछ तपाईंको अनुहार, कसरी प्रयोग गर्ने ? - Nepal Aawaaj
अण्डाको बोक्राले चम्किनेछ तपाईंको अनुहार, कसरी प्रयोग गर्ने ?
Moon Sampang Rai — February 19, 2021 add comment
एजेन्सी- सामान्यतया अण्डाको बोक्रा प्रयोगमा ल्याइँदैन । मानिसहरु यसलाई फ्याक्ने भएपनि यसको फाइदाबारे जानकार हुँदैनन् ।
हामीले खाने कुन–कुन खानेकुरामा पाइन्छ प्रोटिन ?